Pro ကင်မရာ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် - Myanmar End User
By Myanmar End User November 17, 2016 2427 views
ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်..?? ဘယ်ကင်မရာ ဝယ်ရမလဲ..?? ဘယ်မှန်ဘီလူး ဝယ်ရမလဲ..?? ငွေဘယ်လောက် သုံးရမလဲ…??
Nikon ကောင်းလား..?? Canon ကကောင်းလား..?? Sony ကရော ဘယ်လိုနေလဲ…?? စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ခဏခဏ မေးတတ်ကြပါတယ်/
Canon ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Nikon ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက က ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို လူက လိုက်ရိုက်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်…။
တစ်ခုစီမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်…။
ဓာတ်ပုံကို ဝါသနာပါတယ် ဘယ်လိုကင်မရာ ဝယ်ရမလဲ..။ ဘယ် Brand ဝယ်ရမလဲဆိုရင်တော့…။ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးပါ..။
(၁) ငါ ဘယ်လို ဓာတ်ပုံမျိုးကို ရိုက်ချင်တာလဲ …။
(၂) ငွေဘယ်လောက် သုံးနိုင်မလဲ…။
ကင်မရာတွေကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Bridge အုပ်စု နဲ့ DSLR အုပ်စု ဆိုပြီး GROUP နှစ်ခု ခွဲခြားမှတ်သားနိုင်ပါတယ် ။
Bridge ဆိုတာ ကင်မရာရဲ့ဘော်ဒီမှာ သင့်တော်တဲ့ မှန်ဘီလူး( lens ) တစ်လုံးကို အသေတွဲတပ်ဆင်ပြီး ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကင်မရာမျိုးတွေပါ ။Lens ကို အသေတပ်ဆင်ထားတာမို့ Bridge ကင်မရာတွေဟာ DSLR ကင်မရာတွေလို lens အမျိုးမျိုးပြောင်းတပ်လို့မရပါဘူး ။
ဒါပေမယ့်လည်း Bridge တွေဟာ DSLR ကင်မရာတွေ နီးပါးရိုက်လို့ရပါတယ်…။
Shutter Mode (TV/S), Aperture Mode (AV/A), Manual Mode (M) စတဲ့ DSLR မှာပါတဲ့ Function တွေ အားလုံး (နီးပါး) ပါဝင်ပါတယ်…။
DSLR ထက် အားသာတဲ့အချက်က Lens လဲစရာမလိုပဲ Range တော်တော်စုံစုံ ကို ရိုက်လို့ရပါတယ်….။ပီးတော့ DSLR ကင်မရာတွေထက်လည်း ဈေးနှုန်းချိုသာပါတယ် ။
DSLR ထက် အားနည်းချက် (အဓိက အားနည်းချက်) က တော့ Sensor Size သေးလွန်းခြင်းနဲ့ DSLR တွေလောက် ISO မနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
အဲ့ဒီ့အတွက် အဖြေကရှင်းပါတယ်..။ ရိုက်နိုင်သလားဆိုတော့ ရိုက်နိုင်တယ်..။ ဒါပေမယ့် ပုံထွက်ပိုင်းမှာတော့ တော်တော်သိသိသာသာလေး ကွာသွားနိုင်ပါတယ်…။
DSLR ကင်မရာရဲ့ပုံထွက်ကို Bridge ကင်မရာတွေက ဘယ်လိုမှ မမှီပါဘူး ။
ပုံအရည်အသွေးဟာ ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်/ပညာရှင် တစ်ယောက် အတွက် အသက်ဖြစ်တဲ့အတွက် DSLR ကင်မရာတွေကို အသုံးများကြပါတယ်…။
DSLR ဆိုတာ နာမည်ကိုက Digital Single Lens Reflex ကို အတိုကောက် DSLR လို့ခေါ်ကြတာမို့ သူ့နာမည်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိုင်း
ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ Photography အမျိုးအစား တစ်ခုစီအတွက် မဖြစ်မနေ (ဖြစ်နိုင်ရင်) Lens တစ်ခုစီကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုဖို့ လိုပါလိ့မ်မယ်..။
ဥပမာ ပန်းပွင့်လေးတွေ ပုရွက်ဆိတ်လေးတွေ လိပ်ပြာလေးတွေကို အနီးကပ်အလှ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Macro Lens … ရှုခင်းတွေကို ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Ultra Wide Lens … မော်ဒယ်အလှပုံ တွေ – Net Geo တို့ Discovery channel တွေကလို သဘာဝတောတရိစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့
Wild Life ကို ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Tele Lens စသဖြင့် ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အသုံးပြုရမယ့် Lens တွေကွဲပြားသွားပါတယ်…။
အရေးကြီးတဲ့အချက်က စ ဝယ်မယ့်သူတော်တော်များများဟာ DSLR ကို မြင်တိုင်း Professional Camera လို့ ထင်ကြပါတယ်..။
အမှန်တစ်ကယ်ဆို DSLR တိုင်း Professional Camera မဟုတ်ပါဘူး…။ DSLR Camera တွေမှာ Level လေးခုရှိပါတယ်..။
ဒါကတော့ ကင်မရာကို ခုမှစ ထိတွေ့သုံးစွဲတဲ့သူတွေအတွက် သုံးရတာ လွယ်ကူအဆင်ပြေအောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ကင်မရာတွေပါ ။ ဥပမာ ~
စတဲ့ ကင်မရာတွေဟာ entry level တွေပါ ။
(သိသာတဲ့အချက်က Entry Level DSLR Body တွေမှာ Top Panel Display မပါပါဘူး)
ဒါကတော့ အပျော်တမ်းဝါသနာကြီးသူတွေ အတွက် နည်းနည်းပိုကလိလို့ရ တဲ့ အတန်းပေါ့ ။ ဈေးလည်း entey တွေထက် နည်းနည်းလေးပိုလာမယ် ။
Canon မှာဆို 50D, 60D
Nikon မှာဆို D90, D7000, D7100 , D7200
(3) High-End Semi-Pro
ဒါကတော့ ကြေးစားသတင်းထောက်တွေ – မှတ်တမ်းသမားတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ် ။ဈေးလည်း ပိုပေးရ လာပါပြီ ။
Canon မှာဆိုရင် 7D , 6D , 7D mark 2
( 7D ဆိုရင် ဟောလိဝုဒ်/ ဘောလိဝုဒ် စတဲ့ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်နယ်ပယ်တွေမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းရိုက်တဲ့ ကင်မရာအဖြစ်တောင် သုံးကြပါတယ် )
Nikon မှာဆိုရင်တော့ D300, D300sစတာတွေပေါ့ ။
ဒါကတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘွက တစ်ပြားသားမှအလျှော့မပေးနိုင်ဘူးဟေ့ ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ ။
D700, D800, D800s, D3s, D3x, D4- စတာတွေပေါ့ ။
နောက်တစ်ခုက Camera Body တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို တန်းမတူတာတွေ မညှိဖို့ လိုပါတယ်..။
ဥပမာ Nikon က D90 ကို Canon က 5D Mark II နဲ့ ညှိ လို့မရသလို…။ Canon က 7D ကိုလည်း Nikon က D700 နဲ့ သွားညှိ လို့မရပါဘူး..။
Line Up မတူပါဘူး..။ ယှဉ်ချင်ရင် Nikon D90 နဲ့ Canon 50D, 60D (သို့မဟုတ်) Nikon D300s နဲ့ Canon 7D (သို့မဟုတ်)
Nikon D700 နဲ့ Canon 5D Mark II စသဖြင့် သူ့ Line Up နဲ့ သူ ယှဉ်မှသာ အဖြေမှန်ကို ရပါလိမ့်မယ်…။
Pro Level Camera နဲ့ Pro Level မဟုတ်တဲ့ Camera ဘာကွာသလဲ ဆိုရင်တော့ Sensor ပါပဲ..။
Pro Level Camera တွေမှာ Full Frame Sensor (35mm) ပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီး..။
Entry Level က အစ High-End Semi-Pro အဆုံး Canon မှာဆို APS-C 1.6x crop sensor (Canon မှာ APS-H ဆိုတာရှိပါသေးတယ် 1D Series ပါ…။ 1Ds နဲ့ မဆိုင်ပါ..။ 1Ds က Full Frame ပါ..။) နဲ့ Nikon မှာ ဆို DX 1.5 Crop Sensor တွေသာပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။Sensor ကွာတော့ ပုံ quality သိသိသာသာ ကွာသွားပါတယ်..။
အထူးသဖြင့် ISO များများတင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ သိသိသာသာကြီး ကွာသွားပါတယ်..။
ဒီလောက်ဆိုရင် DSLR တွေအကြောင်းကို နဲနဲ တီးမိခေါက် မိလောက်ရှိသွားပြီ ထင်ပါတယ်…။ ကျနော်အခုရေးပြတာမှာ ကျနော်သိသလောက် ဗဟုသုတနည်းနည်းလေးနဲ့ရေးထားတာမို့လို့ လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိမှာပါ ။ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားအောင် သိနားလည်သူများက ကွန်မန့်မှာ ဆက်လက်ဖြည့်စွက်ရေးပေးကြပါလို့ ကျနော် လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုရင်း Request လုပ်ပါတယ် ။
နိဂုံးအနေနဲ့ ကင်မရာ စဝယ်မယ့်သူများအနေနဲ့ ကျွန်တော် အပေါ်က ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိရိုက်ချင်တာလဲ ဆိုတာစဉ်းစားပီး ဝယ်စေချင်ပါတယ်..။
Photography ဟာ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ဝါသနာ ( Expensive Hobby ) တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်ပြီးမှ ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေ အသုံးအတည့်ရင် အရှုံးကြီးပါလိ့မ်မယ်.။
ဝယ်လိုက် မကြိုက်လို့ ပြန်ရောင်းလိုက် လုပ်ရင် ကိုယ့်အတွက် နှစ်ခါ နစ်နာပါတယ်..။ ဒါကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ Canon မှာဆိုရင် (650D, 700D ) ဝယ်လိုက်..။
Nikon မှာဆို D5200 ဝယ် ဘာညာဆိုပြီး ( ဖြစ်နိုင်ရင်) ကျွန်တော် အကြံမပေးလိုပါဘူး..။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Camera သမားတိုင်းဟာ Entry Level Camera ဝယ်ပြီး သိပ်မကြာခင် (၁ လ ၂ လ ) အတွင်းမှာတင် Semi-Pro ကို စ ပြောင်းချင်လာပါတယ်..။
အဲဒီအခါ အောက်ဈေးနဲ့ ကိုယ့်ကင်မရာကို ရောင်းရတဲ့အတွက် တစ်ခါရှုံး..။ Semi-Pro တွေက ဈေးမြင့်တဲ့ အတွက် တစ်ခါ ထပ်ကုန်နဲ့ နှစ်ခါ နာတတ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ ဝယ်စေချင်ပါတယ်..။
အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်မှာသုံးမယ့် ငွေအနေအထားနဲ့ ကိုယ်လိုချင် ရိုက်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားကို ချိန်တွက်ပြီး ဝယ်တတ် ဖို့လိုပါတယ်….။
စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့ကတော့ ~
“သူဘာ Camera သုံးလဲဆိုတာထက်..။ သူဘယ်လိုရိုက်သလဲ…။ ကင်မရာ နောက်က လူက ဘာလဲ” ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
February 24, 2017 71286 views
November 16, 2016 48885 views